သုခုမနန်းတော်: start A (tag post)
start A (tag post)
ရေးသားသူ သုခုမလေဒီ 14 October 2009 အမျိုးအစား တဂ်ပိုစ့်
1. What is your name : A nam
2. A as four Letter Word : Aura
3. boy's Name with A : Andy
4. girl's Name with A : Alice
5. Occupation starts with A : astrology
6. Flower starts with A: anthurium
7. Something you'll wear starts with A: adidas clothes
8. Food starts with A: assorted cake ( I don’t think anything)
9. Something found in the bathroom starts with A: acne cream
10. Country starts with A : Australia
11. Color starts with A: alabaster
12. Exclamation starts withaA: Ah ha!း))
13. Movie title starts with A: Across the Universe (2007)
14. Something you drink starts with A: Apple juice :P ( so eassyyyyyy)
15. A musical group starts with A: Aurora ( right ?)
16. An animal starts with A: apeး))
17. A street name starts with A: Abbey Street ( London)
19. The title ofasong starts with A: A song for u (Celine Dion)
18. A type of car starts with A: acura
20. A verb starts with A: accept
21. Ocean's name starting with A: Atlantic Ocean
22. Mountain's name starting with A: Apennie (Italy)
23. The name of leader ofacountry starting with A: A.S.S.K
ဒီပိုစ့်ကို ကိုယ်သိသလောက်ရေး၊ မသိတာကို ဟိုလူ့ မေး၊ ဒီလူ့ မေးရနဲ့ ခေါင်းတော်တော် နောက်သွားတယ်။ ရေးပြီးမှ google search မှာကြည့်ပါလားတဲ့ ။ ဖွားကိတို့ လုပ်ပုံ အဲသလို။ အချက်၂၀ပဲရေးလိုက်တယ်၊ အပိုဆုမပေးတော့ဘူး။ နောက်ဆုံး accept နဲ့ အဆုံးသတ်ထား တယ် ၊ ဒီလောက်နဲ့ ကျေနပ်။ မကျေနပ်ရင် စီဗုံး လာအော်လိုက်တော့။ စာလုံးပေါင်းမှားရင်လည်းပြင်ဖတ်ပေးနော်း))
အပိုဆုမပါပါဘူးဆိုမှ ကိုကိုမောင်ကထပ်ဖြည့်ခိုင်းသေးတယ်။ ဒါနဲ့ သူ့ အမေး ၃ခုကိုထပ်ဖြည့်စွက်ရသေးတယ်။ နံပါတ်၂၃ကိုတော့ နီးစပ်ရာဖြည့်လိုက်ဆိုလို့သူဖြည့်ချင်တာလေးကိုဖြည့်ထားပေးပါတယ်။း))
(I don't think anything) မှာ "n" ကျကျန်နေခဲ့တယ်...
adidas cloth...? adidas clothes ဖြစ်ရမယ်လေ...
cloth က .ပိတ်စ ..
clothes က အဝတ်အထည် .. (အင်္ကျီ) ..
ဟိဟိ .. မသိသူကို မတတ်သူ က ဆရာကြီးလုပ်သွားဒယ်..
ပျော် ထှာ ..
နောက် ထပ်ရှာလိုက်ဦးမယ် .. ငှဲငှဲ
( ကျေးဇူး ပါကွယ် .. ရေးပေးတာ ပဲ တော်လှပါပြီ ညီမငှေး မအနမ်း ရယ်.. .. ပြန် ချော့ ရတယ်လေ ... )
ကိကိမှာတော့ တွေ့ နေကြပါ။
ငါ့ညီမပေးတဲ့ အကြံကို accept လုပ်ပါတယ်။
ဖွားကိပေးတဲ့ ဆေးတွေလည်း သောက်ပါတယ်။
ကြည့်ရတာ အဲ့ဆေး တိုးတော့ဘူးထင်တယ်။
ညီမသောက်တဲ့ ဆေးနဲ့ မှ ဖြစ်တော့မယ်ထင်တယ် :)။
အပေါ်က အဘလူထွေးနဲ့ မယ်မယ်ထွေးပြင်ပေးလိုက်လို့ ပြင်စရာတော့ မကျန်တော့ဘူးးး ဒါပေမယ့် သမီး သတ္တ၀ါလေးကို ယူရေးတော့ သမီးက ဘာရေးရတော့မှာလဲ ဟင်။ ဟိဟိ
Ape ကို ဆိုလိုတာပါ။ ဟီးးးးးးးးးးးးး
Ocean's name starting with A=
Mountain's name starting with A=
The name of leader ofacountry starting with A=
အဲဒါလေးတွေပါ ထည့်ပေးလိုက်ပါလားအမ။ ပိုပြီး ရှည်သွားအောင်လို့ :D
စည်းကမ်းသေချာလည်းပြောပဲနဲ့ သူများ ရေးတော့
ဖွါးကိရော မမရှင်ရှင်ကပါ ဘောင်မ၀င်လို့ပြန်ရေးတဲ့အော်နေတယ်..
What is good things???
အမှားတွေကို မေ့ထားလိုက် အိုကေ... :P :P :P
ခက်ခက်ခဲခဲ ရေးထားတာကို ခက်ခက်ခဲခဲ လာဖတ်
သွားတယ် အမရေ ( နက်စုတ်နေလို. ) :D
သူများတွေ ဆရာလုပ်တာတွေ့တော့ ကျနော်လဲ ဝင်ရှည်တယ်။ အေစာလုံးက ပါပြီင်္းသားဟာ ဘာတွေ ထွေထွေထူးထူးရေးနေရတာတုန်းဗျာ ဒီလောက်လွယ်တာတောင် ဒီထက်မလွယ်ဘူး။
အမှားတွေပြင်ပေးကြတာကျေးဇူးပါ၊ ကိုကိုမောင်က အပိုဆုထပ်တောင်းနေပြန်ပြီ။ သူ့ ဖို့ တစ်ခုချန်ထားလိုက်
A ကတော့အလွယ်ဆုံးဆိုတာ အိမ်ပြောတာဟုတ်ပါတယ်
Noun တွေရဲ့ ရှေ့ မှာaထည့်ရင်ပေါ့း))
လိုက်ဖတ်နေတာ တဂ်ထားတာက ဖေ့ဘွတ်မှား)
I have interpretafew of the articles on your website now, and I unqualifiedly like your style of blogging. I added it to my favorites trap age file and disposition be checking stand behind soon. Please report register in view my orientation as highly and vindicate me know what you think. Thanks.
Most to do with the danger everywhere over the many of these surfaces can be minimized all the way through preparation or perhaps taking precautions. Sometimes going to be the it is certainly plausible that are most gentle to educate yourself regarding going to be the side effects that can be sustained upon many of these sort relating to slips and falls are shutter to educate yourself regarding going to be the danger. Smallachild and the old can cease to live well withstand fatal side effects much in the way easier than celebrities and others adults. These risk providers also takealot fewer factor before doing something that can be the case potentially reckless. Think about any small boy or girl playing in your bathtub. Even so that you have chock - full adult supervision, they not only can they try to learn more about drop and creep all over going to be the bath tub This can lead for more information on overall leaving an all in one boy or girl or otherwise older adult being able to get on the town regarding going to be the bathtub as in that case.?Professional two way radios are picking everywhere over the many business areas during which time staff are mobile and must maintain their freedom to keep moving around but take heart remain in your contact so that you have pet occupation staff or at least staff back at base. Depending all around the your needs your family can decide on either licensed at least certificate at no charge radio systems. Radiopro are experts as part of your sale relating to radio communications gadgets to explore going to be the private and are expected by law market. Among the range stocked available on the web are Kenwood radios offeringamulti function dependable, affordable option along with radio communication.